↑ ကားလ် လင်းနီးယပ်သည် ဆွီဒင်ပြက္ခဒိန်အရ ၁၇၀၇ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက် သို့မဟုတ် ယခုခေတ် ပြက္ခဒိန်အရ မေ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်အရ မေ ၁၂ ရက် ဖြစ်သည်။ (Blunt 2004, p. 12)
↑ "Interactions of Cultures and Top People of Wikipedia from Ranking of 24 Language Editions" (2015). PLOS ONE 10 (3): e0114825. doi:10.1371/journal.pone.0114825. PMID 25738291. Bibcode: 2015PLoSO..1014825E.
↑ "Wikipedia Reveals Most Influential Person in History, No It's Not Jesus"၊ The Huffington Post၊ 12 June 2014။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကားလ်_လင်းနီးယပ်&oldid=716177" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။